Waa Maxay Dillaal Amaah Ganacsi Yar? - Wareegga Maalka
Bogga ugu weyn Waa Maxay Dillaal Amaah Ganacsi Yar?
Waa Maxay Dillaal Amaah Ganacsi Yar?
Pixabay: Isha sawirka
Safar 10 sano ah ayaa kugu qaadan kara 6 bilood haddii aad hesho qof soo maray safarka si uu jidka kuu saaro; sidaas oo kale doorka dillaalku ku leeyahay arjiga amaahda ganacsiga yar yar iyo safarka.
Meheraddaadu way jaban tahay waxaadna dhex -dhexaadinaysaa intaad lacag doonato iyo inaad hubiso in qaybta ganacsiga ee hadhay ay sii socoto. Kuwani waa laba masuuliyadood oo waaweyn midkoodna aan la dayaci karin.
Waa maxay sababta aadan uga tagin cayrinta amaahda kuwa shaqadoodu tahay inay cayrsadaan amaahda intaad xoogga saareyso inaad shirkaddaada ka dhigto waxa ugu fiican ee ay qabtaan. Halkaas ayay dillaaliyeyaasha amaahdu ka soo galaan. Waxay codsigaaga amaahda ka dhigaan mid aan xuduud lahayn. Waan hubaa inaad doonayso inaad aragto sida ay wax u tari karaan dillaaliyeyaasha amaahdu; run mise haa?
Waa kuwee dillaaliyeyaasha amaahda ganacsigu?
Dillaaliyeyaasha amaahda ganacsiga yar -yar waa shakhsiyaadka iyo shirkadaha falanqeeya xogtaada maaliyadeed, sharraxaya dhammaan barnaamijyada amaahda iyo ikhtiyaarada maaliyadeed ee ay heli karaan shirkadda yar, diyaariyaan xirmo amaah SBA ah si ay ula jaan qaadaan deyn -bixiyayaasha.
Dillaaliinta amaahdu waxay sameeyaan waa inay helaan amaah -bixiyeyaal la jaanqaadi kara amaahda oo ay u soo diraan codsiyo. Waxay badbaadisaa meherad yar waqti aad u badan maadaama dillaaliintaani ay hayaan xog diyaar u ah waxayna xiriir la leeyihiin amaah -bixiyeyaasha sanado badan.
Dillaaliintu waxay sidoo kale si toos ah uga qaadaan adeegyadooda ama waxay ku saleeyaan khidmaddooda deynta; taasi waa boqolkiiba gaar ah oo deynta ah ayaa noqon doonta qarashka dilaaliinta.
Dillaaliinta daymaha ganacsiga
Dillaaliyeyaasha amaahdu waxay leeyihiin meelo kala duwan oo takhasus leh. Waxa ay qaar baaxad weyn yihiin, qaarna ay ku yar yihiin
Tani waxay horseed u tahay xaalad milkiilaha ganacsigu u baahan yahay inuu go'aamiyo nooca amaahda ay rabaan si ay u kiraystaan ​​dillaal si waafaqsan.
Tani waxay ka caawin doontaa inay badbaadiyaan waqti, tamar, iyo lacag.
1. Dillaaliinta amaahda ee SBA
Kuwani waa dillaaliin amaah ah oo ku takhasusay amaahda maamulka ganacsiga yaryar. SBA waxay leedahay shuruudo gaar ah oo sidaas darteed amaahiyayaashu way ku adag tahay inay u hoggaansamaan.
Dillaaliintu si kastaba ha ahaatee aad bay u yaqaaniin shuruudahan waxayna kaa caawin karaan inaad doorato midka aad u qalanto.
2. Dillaaliinta amaahda ee bilowga ah
Bilowyo badan oo cusub waxay u baahan yihiin maalgelin meheraddooda iyo xaqiiqda ah inay hadda soo socdaan waxay la macno tahay inaysan garanayn meel ay ka raadiyaan xagga deymaha. Viola!
Dillaaliintu waxay kaa caawin karaan helitaanka amaahda muddada-dheer iyo muddada-gaaban ee aad u-qalantid.
3. Dillaaliinta amaahda ganacsiga
Kuwani waa kuwa ka shaqeeya bangiyada dhaqanka. Waxay helayaan ikhtiyaarro amaah ah oo laga yaabo inaad danaynayso bangiyada oo aad ka heli karto macluumaad diyaarsan. Waa inaad ka fekertaa inaad kireysato dillaal haddii aad rabto deynta noocan ah.
4. Dillaaliyeyaasha wax soosaarka
Waxay raadiyaan amaahiyayaal lacag kugu amaahiya si ay kuugu beddelaan qaansheegadkaaga oo ay shirkado kale kugu leeyihiin.
Halkii aad kor iyo hoos ugu ordi lahayd sababtoo ah deyn -bixiyayaashaadu waxay diideen inay bixiyaan, waxaad kiraysan kartaa dilaal amaah ganacsi oo yar si aad u hesho amaahiye aqbala qaansheegyada aan la bixin.
Shuruudaha iyo shuruudaha ayaa laga wada hadlaa saddexda dhinac ee khuseeya dulsaarka amaahda iyo dacwadaha dilaaliinta.
Kani waa dillaal kale oo amaah ganacsi ah.
5. Dillaal hore oo lacag caddaan ah oo ganacsade ah
Ganacsiga leh dhibcaha dhibcaha ee xun laakiin socodka lacag caddaan ah oo wanaagsan ayaa fursad u leh inuu deyn ka helo deyn -bixiyeyaal kale oo ka badan dhibcaha dhibcaha.
Waxaan ula jeedaa haddii aad ku fiican tahay dhaqaalahaaga oo aad leedahay qulqul lacag caddaan ah oo wanaagsan, aad bay wax u dhici kartaa; laakiin ma garanaysid cidda doonaysa inay bangiga kula gasho.
Bal qiyaas yaa garanaya? Dillaaliin! Waxay kuugu heli karaan masiixigaaga suuqa maaliyadeed ee qassan.
6. Maalgelinta qalabka
Ganacsatada leh baahida loo qabo in ay iibsadaan qalab iyaga oo aan haysan lacag caddaan ah oo la heli karo waxay u badan tahay inay raadiyaan amaah si ay u helaan mashiinnada.
Deyn -bixiyeyaasha qaarkood waxay diyaar u yihiin inay lacag bixiyaan haddii aad rabto inaad u isticmaasho inaad ku iibsato qalab maadaama ay rumeysan yihiin in qalabka loo adeegsan doono sameynta alaab dakhli soo gelin doonta.
Waxaad kiraysan kartaa dilaal amaah ah oo takhasuskiisu yahay intaas uun.
Toddobada waaweyn: Talooyin lagu Dooranayo Deyn Jaban
Si aad u doorato dillaal, su'aalaha qaarkood lagama tegi karo jawaab la'aan. Waxaa ka mid ah:
Kharashka Amaahda: waxaa wanaagsan inaad ka ogaato wadarta guud ee amaahdaada dillaal ka hor inta aadan heshiis la gelin. Dillaaliinta qaarkood waxay ku siiyaan deyn leh adeeg aad u sarreeya sababtuna tahay xaddiga ay ka qaadaan adeegyadooda; tusaale ahaan, deyn leh dulsaar asal ah oo ah 12% waxay noqon kartaa 27% sababta oo ah dillaaliyuhu wuxuu ku dallacayaa 15% amaahda iyo deyn -bixiyaha, markiisa, ku dar 15% culeyska deyn -qaadaha. Qiimaha dhabta ah waa in mar walba la ogaadaa.
Muuqashada: ma waxaad hordhigaysaa codsigayga kuwo badan oo amaahiyayaal ah mise waxaad igu hagaajinaysaa amaah -bixiyeyaasha qaarkood? Dillaaliintu waa inay kugu meeleeyaan inaad codsato amaah -bixiyeyaal badan adigoo rajaynaya inaad hesho dalabyo badan oo aad hadda isbarbar dhigi karto oo aad dooran karto. Haddii dillaaliyuhu uusan bixin aragti ku filan ama uusan isku dayin, waxaa lagugula talinayaa inaadan la shaqayn dillaaliintaas.
Lacagta adeegga: amaah -bixiyeyaasha qaarkood ma ku siiyaan wax ka badan kuwa deyn -bixiyayaasha ah? Waxaa muhiim ah in la ogaado haddii ay jiraan kala duwanaansho xagga bixinta ah oo ka dhexeeya amaahiyayaasha maxaa yeelay qaar ka mid ah dillaaliyeyaasha ayaa bixin kara khidmadda adeegga boqolkiiba boqol oo sarre ah oo ujeeddadu tahay inay u keenaan macaamiil tayo sare leh. Haddii dillaal ku dhaco qaybtan, waa calan cas.
Asturnaanta: deyn bixiyuhu ma dammaanad qaadayaa asturnaanta xogtaada? Dilaaliin badan ayaa lagu helay dambi ah inay iibiyaan macluumaadka qofkii lacag siiya. Waa jebinta asturnaanta waana inaad hubisaa in dillaaliyuhu saxiixo heshiiska qarsoodinimada kahor inta uusan shaqaaleysiin.
Hoos u dhaca amaahda: had iyo jeer waxaa jira laba dhinac oo qadaadiic ah oo haddii dillaaliyuhu uusan oran labada dhinacba, waa khalad. Waxaad u baahan tahay inaad ka hadasho dhinaca taban ee amaahda sida dulsaarka la bixinayo, ciqaabta kuwa kale. Sababta oo ah in deymaha oo dhami aysan fiicnayn iyo waxa ugu dambeeya ee aad rabto inaad sameyso sidii ganacsi halgan ama mid u baahan dhaqaale aad u xun ayaa ah inaad gasho wax ka badan culeyska loo baahan yahay.
Goor dambe ma go'aansan karaa: dalabyada deyn -bixiyayaashu waa inay sugaan oo ka fikiraan ka hor inta aysan go'aansan inay aqbalaan. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan deynta. Si kastaba ha noqotee, haddii dillaaliyuhu u muuqdo inuu yahay qof had iyo jeer ku degdegaya, markaa ganacsi aan la yeelan ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican maxaa yeelay waxay kugu dardargelin karaan go'aanno khaldan.
Tababar: Ururo dhowr ah ayaa ku takhasusay tababarka dilaaliinta iyo ruqsad siinta. Waa lama huraan in dillaalkaagu ruqsad haysto oo si fiican u tababaran yahay si aad u hubiso cidda ay yihiin. La macaamilka dillaaliinta iyada oo aan la haynin caddaynta cinwaanka iyo shahaadada ayaa kuu soo bandhigi karta khiyaano.
Akhri: 10 Deymaha Bilowga Ganacsiga
Dilaaliin waa inaadan ku saxiixin
Dillaalku waa inuu kuu hayaa qaar ka mid ah macluumaadka asaasiga ah taas oo asaas u noqon doonta Dhabnimadaada.
Cinwaanka xidhiidhka: dilaaliyuhu waa inuu si sahlan u diyaariyaa cinwaankooda xiriirka sida lambarrada taleefanadooda, cinwaanka xafiiska jireed, cinwaankooda iimayl xirfadeed iyo kuwo kale. Tani waxay muujinaysaa heerka ay gaarsiisan tahay halista ay geliyeen shaqadooda iyo xoogga shaqada ee aad filan karto haddii aad shaqaaleysiiso. Qof aan lahayn iimayl xirfadeed waa mid aan caqli gal ahayn oo waa in laga fogaadaa.
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah: dokumentigu waa inuu ahaadaa mid f = diyaar ah oo muujinaya in dilaaliyuhu uu xogtaada ka dhigi doono mid qarsoodi ah oo uusan iibin doonin ama kashifin doonin. Tani aad bay muhiim u tahay maadaama dillaalkaagu uu lahaan doono dokumentiyo dhibcaha dhibcahaaga, macluumaadka xiriirka, iyo gobolka maaliyadeed. Ma doonaysid inaad taas uga tagto gacanta qof aan u soo bandhigin inuu ilaaliyo.
Amaahiyayaal sumcad leh
Qaar ka mid ah amaahiyeyaasha ayaa magacooda ku sameeyay suuqa maaliyadeed waana hagaag in la fiiriyo si aad safarkaaga uga bilowdo kuwa ugu fiican.
S / N XAALADAHA QALABKA
1. Gokapital Amaahda warshadaha khatarta sare leh
2. Biz2cedit Deyn dhaqameed iyo mid aan dhaqan ahayn
3. SmartBiz Amaahda SBA
4. Amaaho Wuxuu isbarbar dhigayaa dalabyada amaahiyeyaasha aqoonta u leh
5. Lendio Fursadaha rogrogmi kara
6. Raasamaalka ganacsiga qaranka Amaahda muddada gaaban iyo muddada dheer
SU'AALO BADAN LA ISWAYDIIYO OO KU SAABSAN GANACSIGA GANACSIGA GANACSIGA
Waa maxay shirkadda dillaalka amaahda?
Dillaal amaah, ama dillaal amaah, waa ninka/naagta dhexe ee u dhaxaysa deyn bixiye iyo amaahiye. In kasta oo deyn -bixiyuhu si toos ah uga amaahan karo deyn -bixiye, amaah -bixiye ayaa ka caawin kara deyn -bixiyaha go'aaminta amaah -bixiyeha la kulma yoolalka maaliyadeed ee deyn -bixiyaha. Lacagtooda waxaa laga qaadi karaa deyn -bixiyaha, laakiin mararka qaarkood waxaa laga qaadaa deyn -qaadaha.
Sideed ku heshaa amaah ganacsi?
Baro sida bangiyada kuu qiimeeyaan. Ogow waxyaabaha keena sumcadda amaahda.
Go'aanso nooca amaahda ama maalgelinta muddada dheer ee aad u baahan tahay. Amaahda oo dhami isku mid ma aha.
Go'aanso deyn -bixiyaha
Go'aanso fursadahaaga oggolaanshaha.
Waa maxay dhibcaha dhibcaha ee looga baahan yahay amaahda ganacsiga yaryar?
Sideen ugu qalmaa amaahda ganacsiga yar?
Dhis dhibcaha dhibcaha shaqsiga iyo ganacsiga. Dhibcaha amaahda shaqsiyeed waxay muujinayaan awoodda aad u leedahay bixinta deymaha shaqsiyeed, sida kaararka deynta, amaahda baabuurka, iyo amaahda guryaha.
Ogow shahaadooyinka iyo shuruudaha ugu yar ee dayn -bixiyaha.
Aruuri dukumentiyada dhaqaalaha iyo sharciga.
Samee qorshe ganacsi oo xooggan.
Miyaad dillaali kartaa amaahda SBA?
Dillaaliyeyaasha amaahda SBA waxay ku fiican yihiin dhammaan barnaamijyada amaahda SBA ee kuu oggolaanaya inaad xoogga saarto socodsiinta meheraddaada, halkii aad ka baari lahayd barnaamijyada kala duwan. La -taliyayaasha amaahda SBA ee wanaagsan iyo dillaaliinta ayaa falanqeyn kara dhaqaalahaaga ganacsiga waxayna ku siin karaan talo khabiir barnaamijyada ku habboon shirkaddaada.
Cirbadda ku jirta haynta ayaa ka fiican in keligiis la iska daayo maaddaama shaqadu ay aad u daalin doonto, si kastaba ha ahaatee waxay noqonaysaa mid aad u fudud marka aad soo bandhigto birlab. Taasi waa tusaale wax ku ool ah adiga oo adiga laftaadu raadinayso amaahiyayaal oo aad shaqaalaysiiso dillaal si uu kuu sameeyo.
In kasta oo ay ku timaaddo kharash, waxaa habboon in aad waqtigaaga meel kale ku qaadato halkii aad isku dayi lahayd in aad lacag keydsato.
Dillaaliintu waxay hayaan macluumaadka aad u baahan tahay mana tihid qofka ugu horreeya ee hortaagan arrin noocan oo kale ah. Mise waxaad tahay macmiilkoodii ugu horreeyay? Fadlan si naxariis leh u hel dillaal kale oo khibrad leh!
Waxaan rajaynayaa inaad weli xusuusato sababta aad ugu baahan tahay dillaal wanaagsan iyo sida loo ogaado mid, haddii aan si naxariis leh loo kicin oo mar labaad la hubiyo, waa dhowr khad.
Forbes: Dillaal amaah ganacsi yar
Ganacsiga Fitsmall: dillaaliinta amaahda ganacsiga ugu fiican
Funder: dillaal amaah ganacsi
Nav: maxay yihiin dillaalka amaahda ganacsiga yar yar
Ardeyda Ugu Fiican Amaahda Dib -u -Celinta
Amaahda Shakhsiyeed ee Ugu Fiican Deynta Xun
Amaahda Bilowga Xirfadda USAA: Ogow tan intaadan deyn qaadan
20 Kaararka Amaahda Ugu Fiican 2021
Arrin caadi ah oo ka mid ah milkiilayaasha ganacsiga waa sida loo xareeyo LLC. Dalbashada mas'uuliyadda xaddidan…
Maaddaama ganacsiyada internetka ay noqdaan kuwo caan ah, baahida ganacsiyada xambaara ayaa kor u kacaya baahida. Suuqa...